မွတ်ဆလင်ဝါဒဟာ . . . ဂျူးတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေလို့ Quran ထဲမှာရေးထားပါတယ်။ ဘာသာမတူတွေကိုလဲ သတ်ဖို့ သင်ကြားထားပါတယ်။ အရမ်းကို အောက်တန်းကျတဲ့ ၀ါဒပါပဲ။ ပထမ ဗီဒီယိုကတော့ မွတ်ဆလင်ကလေးငယ်ဟာ ဂျူးတွေကို တိရိစ္ဆာန်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောဆိုနေတာပါ။ Quran ထဲမှာ ဂျူးတွေဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေလို့ ရေးထားကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြောဆိုတာ တွေ့ကြမှာပါ။ ဘာသာတိုင်းဟာ ကောင်းအောင်သင်ပေးတယ်ဆိုရင်… ကလေးငယ်ဘ၀မှာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို မုန်းတီးဖို့သင်ပေးတာက ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ကြားချက်လား? ဒါကိုကြည့်ရင် မွတ်ဆလင်ဟာ ဘာသာမဟုတ်ပဲ လူရမ်းကားဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။ ဒုတိယဗီဒီယိုကတော့ သူတို့ကလေးငယ်အသက်ကို ဂျူးတွေက မကယ်လို့ဆိုပြီး အပြစ်တင်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင်သတင်းပါ။ သူတို့က ဂျူးတွေကိုဆဲဆိုတယ်…. ဂျူးတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရိုက်သွင်းထားတာပါ။ သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန် ဂျူးတွေက မကူညီလို့ အပြစ်တင်တယ်ဆိုပဲ။ ၀ါးဟားဟား…. သူတို့ကို လူလိုသဘောထားစရာအကြောင်းရှိလို့ ကူညီစေချင်တာလား? တန်ရာ..တန်ရာပေါ့။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:48 AM